ရေခဲနန်းတော် ခရီးစဉ် (၇ရက်)KH-Special-004
မဟာတံတိုင်းကြီးကို ထူးထူးခြားခြား၊ တစ်နှစ်တစ်ပဲ ကျင်းပတဲ့ ရေခဲနန်းတော်ပွဲတော် တွဲထားတဲ့ ခရီးစဉ်
Day : 1 Yangon-Beijing (Dinner)
Yangon International Airport မှ Beijing Capital International Airport သို့ညနေ လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။Beijing သို့ရောက်ရှိလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှကြိုဆိုပြီးလျှင် ဟိုတယ်တွင် ညစာသုံးဆောင်ကာ အနားယူပါမည်။
Day :2Beijing-Harbin (Breakfast/[email protected] train/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Harbin မြို့သို့ အမြန်ရထား (7:00-14:52) ဖြင့် ၈ နာရီခန့်စီးကာ သွားပါမည်။နေ့လည်စာကို အမြန်ရထားပေါ်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။Harbin သို့ရောက်လျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆိုပြီး ညစာသုံးဆောင်ပြီး အနားယူပါမည်။ (shopping အတွက်tour leader နှင့်ညှိကာ သွားနိုင်ပါမည်။ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်ဖြစ်ပါမည်။)
Day :3Harbin Tour (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး နာမည်ကျော် Songhua မြစ်သို့သွားရောက်ပါမည်။ ဟာဘင်း ရေခဲနှင်းကမ္ဘာ ပွဲတော်ရဲ့ဆောင်းရာသီ ရေကူးပြိုင်ပွဲ ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ရေခဲပန်းပု နှင်းပန်းပု ဖန်တီးခြင်း အနုပညာပြပွဲ Sun Island Snow Scrupture Expo ကျင်းပရာ Sun Island ကျွန်းသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ အချိန်ရလျှင် Songhua မြစ်ကမ်းဘေး နှင့် အခြားစိတ်ဝင် စရာ Activity များကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်လည်ပတ်ဆင်နွဲှနိုင်ပါသည်။ Stalin Park အပန်းဖြေ ဥယျာဉ် သို့သွားရောက်အပြီး 1907 ခုနှစ် ကစစ်ပြေး ရုရှားစစ်သည်များ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် အကြီးမားဆုံး St. Sophia Church သို့သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ပြီးလျှင် Russian Style စတိုး စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦများ ရှိရာ Harbin မြို့ရဲ့ အလှဆုံး လမ်းအဖြစ်တင်စားကြသော Central Avenue သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်အပြီး Chinese Style ညနေစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။
Day :4Harbin Tour (Breakfast/Lunch/Dinner)
နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး 1980 ခုနှစ်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမအဆင့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေး စာရင်းဝင် ခဲ့သော Siberian ကျားဥယျာဉ် သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ယခုအခါ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးလာ မှုှုကြောင့် မျိုးတုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေရသော Siber ကျား များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် တလက်လက် တောက်နေသောရေပြာပြာ ကျောက်ခတ်ပင် ပန်းမျိုးစုံများ နှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံတို့နှင့် ဝန်းရံထားသော Snghuaမြစ်၏ မြောက်ဘက် မြစ်ကမ်းရှိ Sun Island နှင်းပန်းပု ကျွန်း သို့သွားရောက်ပါမည်။ နွေရာသီတွင် အပူရှောင်ရှားရန် လည်ပတ် ကြသလို ဆောင်းရာသီတွင်လည်း နှင်းချစ်သူတို့လည်ပတ်ကြသော Paradiseနေရာလေးဖြစ်ပါသည်။ Sun Island တွင် နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင်းပန်းပု အနုပညာပြပွဲ ကျင်းပကြပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရေခဲပန်းပု နှင်းပန်းပု များကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်မတူညီသော Theme များဖြင့် ဖန်တီးထားသော ပန်းပု အနုပညာများ ဖြစ်သောကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု ရသအစုံအလင်ကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ညစာကို သုံးဆောင်ပါမည်။
Day :5Harbin-Beijing (Breakfast/[email protected] train/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Beijing မြို့သို့ အမြန်ရထား ဖြင့် ပြန်ကြပါမည်။Beijing သို့ရောက်လျှင် hotel check in ဝင်ကာ ပြီးလ ျှင် ပေကျင်းမြို့ထဲ ရှိနေရာများဖြစ်သော ပြည်သူ့ရင်ပြင် နှင့် နန်းတော် အားသွားရောက်လည်ပတ်ကာ ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day :6Beijing Tour-Great wall at Juyong (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ကားဖြင့် ၁နာရီခွဲခန့်မောင်းကာ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီ သို့ သွားကြပါမည်။ မဟာတံတိုင်းပေါ်သို့ cable car ဖြင့်တက်ရောက်ပါမည်။ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အိုလန်ပစ်အားကစားကွင်းကြီးတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါမည်။ကစားကွင်းကြီးသည် ဌက်သိုက်ပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားပြီး Aquatic Center အားရေစတုဂံပုံ ဆန်းဆန်းပြားပြား တည်ဆောက် ထား ပါသည်။ပြီးလျှင် ညစာသုံးဆောင်ကာ hotel တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :7Beijing-Yangon (Breakfast/Lunch)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြည်သူ့ရင်ပြင်ကြီးဖြစ်သော Tian’ anmen Square သို့သွားရောက်ပြီး ထိုမှတဆင့် တရုတ်ပြည်ရဲ့Forbidden City ဖြစ်တဲ့နန်းတော်ကြီးကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။Ming & Qing မင်းဆက်ပေါင်း ၂၄ ဆက်တိုင်တိုင်နန်းတက်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးရှေး ဗိသုကာလက်ရာ နန်းတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး လျှင် နွေရာသီနန်းတော်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်သို့ပြန်ရန်အတွက် လေဆိပ်သို့သွားပါမည်။
ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
1. International ေလယာဥ္လက္မွတ္ ႏွင့္ ရထားလက္မွတ္ fee မ်ား
2.3stars or 4stars Hotel ၆ ညတည္းခိုစရိတ္( တစ္ခန္းနွစ္ေယာက္နွုန္း)
3. ခရီးစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဝင္ေႀကးစရိတ္မ်ား နွင့္ပို ့ေဆာင္ခမ်ား
4. ခရီးစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စားေသာက္စရိတ္မ်ား(အေဖ်ာ္ယမကာခမပါ၀င္ပါ)
5. Company မွ ျမန္မာစကားေျပာ tour leader နွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ guide
ခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
1.China မွ guide ႏွင့္ driver အတြက္ tips
2. Personal အသံုးစရိတ္မ်ား ႏွင့္ ခရီးစဥ္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ အရာမ်ား